တပျတှငျးမှာ အောကျခွပေိုငျးဟာ တျောတျောလေး စိတျဓာတျကဆြငျးနတော အမှနျတရားပါ – Cele Lover
တပျတှငျးမှာ အောကျခွပေိုငျးဟာ တျောတျောလေး စိတျဓာတျကဆြငျးနတော အမှနျတရားပါ
ကိုယျ့လူကို ကိုယျပွနျလိမျနရေတဲ့ မအလရဲ.ဘဝသုံးခုထကျပိုတဲ့ ခိုငျလုံတဲ့ သတငျးရငျးမွဈတှအေရ တပျတှငျးမှာ အောကျခွေ ပိုငျးဟာ တျောတျောလေး စိတျဓာတျကဆြငျးနတော အမှနျတရားပါ။
( တပျထဲမှာ D day ကို တိတျတိတျလေး မြှျောနကွေတဲ့ အဖှဲ.တှကေလညျး သူ. အစု နဲ. သူ ခပျလြှိုလြှိုနဲ. ရှိနကွေပါတယျ။ NUG အနနေဲ. ဒီဟာကို တပျက CDM လုပျလာတဲ့ ဗိုလျကွီး ညီသုတတို.လို ပွညျသူ. တပျမတျောသားမြားနဲ. ဆှေးနှေးတိုငျပငျပွီး သခြော ပွငျဆငျ လုပျဆောငျဖို. လိုနတော အမှနျပါ။)
မအလတို.အနနေဲ. အထကျက ပွောတဲ့ တပျတှငျး စိတျဓာတျပကျြနတောကို သိလို. သတငျးတှထေဲကနေ တပျထဲက မကျြစိပိတျ နားပိတျ တဈစု ( တပျထဲက လူတိုငျး အဲ့လို မဟုတျပါ ) လိမျဖို. အစှမျးကုနျ ကွိုးစားနတောကို ဒီရကျပိုငျးမှာ MRTV နဲ. MWD တို.မှာ အထငျအရှား မွငျခဲ့ရပါပွီ။
ကုလမဲခှဲပှဲမှာ အကွီးအကယျြ အရှကျကှဲခဲ့ရတာနဲ.ပဲ ရုရှားက ကာကှယျရေးဝနျကွီးလောကျ တကျရတဲ့ အစညျးအဝေးကို တကျပွီး ပူတငျကွီးက လကျခံမလားဆိုတာကို ကွိုးစားပါသျောလညျး ဟိုက စာထုတျပွီး ငွငျးတာ ခံခဲ့ရတဲ့ အပွငျ ပူတငျ အနံ.ရှုဖို.တောငျ အခှငျ့မရပဲ ဗှီဒီယိုကနပွေီ ပူတငျစကားပွောတာကို ဖူးမြှျောခှငျ့ပဲရခဲ့တာပါ။
သူ.ကို သနားပွီး ရုရှားက ဂုဏျထူးဆောငျ ဒေါကျတာဘှဲ.ပေးတာကိုလညျး သတငျးမှာ ပွတာကတော့ အတျောကို ရယျစရာ ကောငျးတဲ့ အဆငျ့ ရောကျသှားခဲ့တာပါ။မအလ ခငျဗြာမှာလညျး စဈသား တဈယောကျ ဖွဈပွီး သူရသတ်တိနဲ. ဆိုငျတဲ့ ဘှဲ. ကလှဲလို. ကနျြတဲ့ ဘှဲ.တှေ အတျောရတာတော့ တျောတျော ရယျစရာကောငျးတဲ့ အဖွဈပါ။ထိုကျတနျတယျဆိုတာထကျ သနားလို. အပေးခံရတဲ့ ဘှဲ.တှဟော တကယျတော့ ရှကျစရာဘှဲ.တှေ ဖွဈတယျဆိုတာ သူတကယျ မသိတာလား။
သူ.ကို ပူတငျက လကျမခံပဲ ကာကှယျရေး ဝနျကွီး နဲ. အတူ ဂုဏျပွုတပျ စဈခဲ့ရတဲ့ အဖွဈကို အခဲမကတြေော့ ရုရှားလကျအောကျခံTartarstan တာတာစတနျ နိုငျငံကို သှားပွီး အဲ့က အမညျခံ သမ်မတ နဲ. တှေ.ပွီး ဓာတျပုံရိုကျပွီး သတငျး ဖနျတီးပါတယျ။အဲ့ နိုငျငံက ကုလ မှာ မဲခှဲတုနျးက ဘယျမြားရောကျနလေဲ မေးရငျ ဖွရေခကျမှာ မအလ မသိလရေော့သလား။ အခုဆိုလညျး တပျထဲက လူတှေ သိသငျ့သလောကျ သိကုနျကွပါပွီ။
တပျပွငျကို ကွညျ့မယျဆိုလညျး တပျမတျောထောကျခံသူမြား ဆိုတဲ့ သူတှဟော စိတျဓာတျကပြွီး လိုငျးပျေါအျောတယျဆိုတာကတော့ မထူးဆနျးပါ။ အငျအားကွီးသူပွေးကပျမယျဆိုတဲ့ သူမြားအားကိုးတတျတဲ့သူတှအေနနေဲ.
အခု အခြိနျမှာ ကိုယျခွပေျေါကိုယျရပျပွီး ဒလံတှကေို သမနတေဲ့ ပွညျသူ. တပျမတျော PDF တှကေို ကွောကျတာက သဘဝကပြါတယျ။ သတ်တိမရှိလို. ကပျဖားလုပျကွတဲ့သူတှလေေ။ အခုတော့ သူတို. သိပွီလေ သူတို. အထငျကွီးတဲ့ မအလက သူတို.ကို အခြိနျပွညျ့ မကာကှယျနိုငျတော့ဘူးဆိုတာလေ။PDF တှကေလညျး နိုငျငံအနှံ. တဈဖှဲ.နဲ. တဈဖှဲ. ခြိတျဆကျပွီး ဒလံရှငျးလငျးရေး ကို တိုးမွှငျ့လုပျနတေဲ့ပုံကို ပိုတှေ.လာရတယျ။ နယျစညျးမခွားဆိုတဲ့ ဒလံရှငျးလငျးရေး အဖှဲ.ကလညျး ပိုထိရောကျလာတာ အထငျသားတှေ.နရေတယျ။
တကယျတော့ ဒလံ ရှငျးလငျးရေးဟာ နံပါတျ ၁ အရေးကွီးဆုံးပဲ။ ကနြျော လူသတျတာ အားမပေးပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ လူကောငျးတှေ နဲ. အပွဈမရှိတဲ့သူတှရေဲ. ဘဝတှေ မလုံခွုံ ပဲ အသကျတှဆေုံးရှုံး ရမယျ့ အဖွဈကနေ ကယျတငျဖို.ကတော့ ဒလံကို မဖွဈမနေ ရှငျးရမှာ အမှနျပါ။တပျထဲက ပွညျသူ.စဈသားတှကေိုယျတိုငျ ဒလံ ရှငျးလငျးရေးကို ပျေါတငျအားပေးတဲ့ အထိ ဖွဈလာနတော သိတဲ့သူတှလေညျး သိနကွေပါပွီ။
အဲ့တော့ ဒလံလုပျနသေူမြားကို ပွောခငျြတာ မကောငျးတဲ့ အလုပျတှကေို ရပျတနျးက ရပျပါ။ မဟုတျရငျ ကိုယျတိုငျ မသနျမစှမျးဖွဈရငျ ဖွဈ မဟုတျရငျ ငရဲကရြုံတငျမကဘူး လူ.လောကမှာ ကနျြခဲ့မယျ့ မိသားစုဝငျတှဟောလညျး သားစဉျမွေးဆကျ ခေါငျးမဖျောရဲတဲ့ ဘဝ ရောကျသှားမှာပါ။စကားမစပျ ဟိုနေ.က မနျးတိုကျပှဲမှာ အဆောကျအဦးမှာ ကညျြရာတောငျ မရှိဘူး ဆိုပွီး သုံးသပျနကွေတဲ့သူတှဟော အဲ့နရောတောငျ သှားမကွညျ့ပဲ ပွောနတော ထငျရှားနပေါတယျ။
အဲ့ကညျြရာတှကေို တှေ.တဲ့သူတှခေမြာလညျး အထပျထပျရှငျးပွနရေတာ တျောတျောလေးတောငျ မောနပေါပွီတဲ့ခငျဗြာ။ သခြော သိမှ သုံးသပျပွောကွတာ ကောငျးမယျထငျပါတယျ။မူးယဈနဲ. မအလ နဲ. ဆကျနှယျမှုတှကွေောငျ့ ဘာဖွဈမယျ ညာဖွဈမယျဆိုပွီး ပွောနကွေတာနဲ. ပတျသကျပွီးတော့ လောလောဆယျမှ ဘာမှ သုံးသပျပွီး မပွောခငျြသေးပါ။
နိုငျငံတကာ သတငျးတှမှော မအလကို မူးယဈခေါငျးဆောငျဆိုပွီး အမရေိကနျ ကွငွောတယျဆိုတာတော့ အခု ပို.ဈရေးခြိနျအထိ မတှေ.သေးပါ။ ဒီပွဿနာ မဖွဈနိုငျဘူးလို. ငွငျးနတော မဟုတျပါဘူး။ အရမျးကို ရှုပျထှေးပွီး နကျနဲတဲ့ အမှုဆိုတာကတော့ သိသာလှနျးလို. လောလောဆယျတော့ စောငျ့ကွညျ့ကွပါလို.ပဲ ပွောခငျြပါသေးတယျ။
Dr. Kyaw Kyaw Lin (27.6.21)
တပ်တွင်းမှာ အောက်ခြေပိုင်းဟာ တော်တော်လေး စိတ်ဓာတ်ကျဆင်းနေတာ အမှန်တရားပါ
ကိုယ့်လူကို ကိုယ်ပြန်လိမ်နေရတဲ့ မအလရဲ.ဘဝသုံးခုထက်ပိုတဲ့ ခိုင်လုံတဲ့ သတင်းရင်းမြစ်တွေအရ တပ်တွင်းမှာ အောက်ခြေ ပိုင်းဟာ တော်တော်လေး စိတ်ဓာတ်ကျဆင်းနေတာ အမှန်တရားပါ။
( တပ်ထဲမှာ D day ကို တိတ်တိတ်လေး မျှော်နေကြတဲ့ အဖွဲ.တွေကလည်း သူ. အစု နဲ. သူ ခပ်လျှိုလျှိုနဲ. ရှိနေကြပါတယ်။ NUG အနေနဲ. ဒီဟာကို တပ်က CDM လုပ်လာတဲ့ ဗိုလ်ကြီး ညီသုတတို.လို ပြည်သူ. တပ်မတော်သားများနဲ. ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီး သေချာ ပြင်ဆင် လုပ်ဆောင်ဖို. လိုနေတာ အမှန်ပါ။)
မအလတို.အနေနဲ. အထက်က ပြောတဲ့ တပ်တွင်း စိတ်ဓာတ်ပျက်နေတာကို သိလို. သတင်းတွေထဲကနေ တပ်ထဲက မျက်စိပိတ် နားပိတ် တစ်စု ( တပ်ထဲက လူတိုင်း အဲ့လို မဟုတ်ပါ ) လိမ်ဖို. အစွမ်းကုန် ကြိုးစားနေတာကို ဒီရက်ပိုင်းမှာ MRTV နဲ. MWD တို.မှာ အထင်အရှား မြင်ခဲ့ရပါပြီ။
ကုလမဲခွဲပွဲမှာ အကြီးအကျယ် အရှက်ကွဲခဲ့ရတာနဲ.ပဲ ရုရှားက ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးလောက် တက်ရတဲ့ အစည်းအဝေးကို တက်ပြီး ပူတင်ကြီးက လက်ခံမလားဆိုတာကို ကြိုးစားပါသော်လည်း ဟိုက စာထုတ်ပြီး ငြင်းတာ ခံခဲ့ရတဲ့ အပြင် ပူတင် အနံ.ရှုဖို.တောင် အခွင့်မရပဲ ဗွီဒီယိုကနေပြီ ပူတင်စကားပြောတာကို ဖူးမျှော်ခွင့်ပဲရခဲ့တာပါ။
သူ.ကို သနားပြီး ရုရှားက ဂုဏ်ထူးဆောင် ဒေါက်တာဘွဲ.ပေးတာကိုလည်း သတင်းမှာ ပြတာကတော့ အတော်ကို ရယ်စရာ ကောင်းတဲ့ အဆင့် ရောက်သွားခဲ့တာပါ။မအလ ခင်ဗျာမှာလည်း စစ်သား တစ်ယောက် ဖြစ်ပြီး သူရသတ္တိနဲ. ဆိုင်တဲ့ ဘွဲ. ကလွဲလို. ကျန်တဲ့ ဘွဲ.တွေ အတော်ရတာတော့ တော်တော် ရယ်စရာကောင်းတဲ့ အဖြစ်ပါ။ထိုက်တန်တယ်ဆိုတာထက် သနားလို. အပေးခံရတဲ့ ဘွဲ.တွေဟာ တကယ်တော့ ရှက်စရာဘွဲ.တွေ ဖြစ်တယ်ဆိုတာ သူတကယ် မသိတာလား။
သူ.ကို ပူတင်က လက်မခံပဲ ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီး နဲ. အတူ ဂုဏ်ပြုတပ် စစ်ခဲ့ရတဲ့ အဖြစ်ကို အခဲမကျေတော့ ရုရှားလက်အောက်ခံTartarstan တာတာစတန် နိုင်ငံကို သွားပြီး အဲ့က အမည်ခံ သမ္မတ နဲ. တွေ.ပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီး သတင်း ဖန်တီးပါတယ်။အဲ့ နိုင်ငံက ကုလ မှာ မဲခွဲတုန်းက ဘယ်များရောက်နေလဲ မေးရင် ဖြေရခက်မှာ မအလ မသိလေရော့သလား။ အခုဆိုလည်း တပ်ထဲက လူတွေ သိသင့်သလောက် သိကုန်ကြပါပြီ။
တပ်ပြင်ကို ကြည့်မယ်ဆိုလည်း တပ်မတော်ထောက်ခံသူများ ဆိုတဲ့ သူတွေဟာ စိတ်ဓာတ်ကျပြီး လိုင်းပေါ်အော်တယ်ဆိုတာကတော့ မထူးဆန်းပါ။ အင်အားကြီးသူပြေးကပ်မယ်ဆိုတဲ့ သူများအားကိုးတတ်တဲ့သူတွေအနေနဲ.
အခု အချိန်မှာ ကိုယ်ခြေပေါ်ကိုယ်ရပ်ပြီး ဒလံတွေကို သမနေတဲ့ ပြည်သူ. တပ်မတော် PDF တွေကို ကြောက်တာက သဘဝကျပါတယ်။ သတ္တိမရှိလို. ကပ်ဖားလုပ်ကြတဲ့သူတွေလေ။ အခုတော့ သူတို. သိပြီလေ သူတို. အထင်ကြီးတဲ့ မအလက သူတို.ကို အချိန်ပြည့် မကာကွယ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတာလေ။PDF တွေကလည်း နိုင်ငံအနှံ. တစ်ဖွဲ.နဲ. တစ်ဖွဲ. ချိတ်ဆက်ပြီး ဒလံရှင်းလင်းရေး ကို တိုးမြှင့်လုပ်နေတဲ့ပုံကို ပိုတွေ.လာရတယ်။ နယ်စည်းမခြားဆိုတဲ့ ဒလံရှင်းလင်းရေး အဖွဲ.ကလည်း ပိုထိရောက်လာတာ အထင်သားတွေ.နေရတယ်။
တကယ်တော့ ဒလံ ရှင်းလင်းရေးဟာ နံပါတ် ၁ အရေးကြီးဆုံးပဲ။ ကျနော် လူသတ်တာ အားမပေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် လူကောင်းတွေ နဲ. အပြစ်မရှိတဲ့သူတွေရဲ. ဘဝတွေ မလုံခြုံ ပဲ အသက်တွေဆုံးရှုံး ရမယ့် အဖြစ်ကနေ ကယ်တင်ဖို.ကတော့ ဒလံကို မဖြစ်မနေ ရှင်းရမှာ အမှန်ပါ။တပ်ထဲက ပြည်သူ.စစ်သားတွေကိုယ်တိုင် ဒလံ ရှင်းလင်းရေးကို ပေါ်တင်အားပေးတဲ့ အထိ ဖြစ်လာနေတာ သိတဲ့သူတွေလည်း သိနေကြပါပြီ။
အဲ့တော့ ဒလံလုပ်နေသူများကို ပြောချင်တာ မကောင်းတဲ့ အလုပ်တွေကို ရပ်တန်းက ရပ်ပါ။ မဟုတ်ရင် ကိုယ်တိုင် မသန်မစွမ်းဖြစ်ရင် ဖြစ် မဟုတ်ရင် ငရဲကျရုံတင်မကဘူး လူ.လောကမှာ ကျန်ခဲ့မယ့် မိသားစုဝင်တွေဟာလည်း သားစဉ်မြေးဆက် ခေါင်းမဖော်ရဲတဲ့ ဘဝ ရောက်သွားမှာပါ။စကားမစပ် ဟိုနေ.က မန်းတိုက်ပွဲမှာ အဆောက်အဦးမှာ ကျည်ရာတောင် မရှိဘူး ဆိုပြီး သုံးသပ်နေကြတဲ့သူတွေဟာ အဲ့နေရာတောင် သွားမကြည့်ပဲ ပြောနေတာ ထင်ရှားနေပါတယ်။
အဲ့ကျည်ရာတွေကို တွေ.တဲ့သူတွေခမျာလည်း အထပ်ထပ်ရှင်းပြနေရတာ တော်တော်လေးတောင် မောနေပါပြီတဲ့ခင်ဗျာ။ သေချာ သိမှ သုံးသပ်ပြောကြတာ ကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်။မူးယစ်နဲ. မအလ နဲ. ဆက်နွယ်မှုတွေကြောင့် ဘာဖြစ်မယ် ညာဖြစ်မယ်ဆိုပြီး ပြောနေကြတာနဲ. ပတ်သက်ပြီးတော့ လောလောဆယ်မှ ဘာမှ သုံးသပ်ပြီး မပြောချင်သေးပါ။
နိုင်ငံတကာ သတင်းတွေမှာ မအလကို မူးယစ်ခေါင်းဆောင်ဆိုပြီး အမေရိကန် ကြေငြာတယ်ဆိုတာတော့ အခု ပို.စ်ရေးချိန်အထိ မတွေ.သေးပါ။ ဒီပြဿနာ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို. ငြင်းနေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ အရမ်းကို ရှုပ်ထွေးပြီး နက်နဲတဲ့ အမှုဆိုတာကတော့ သိသာလွန်းလို. လောလောဆယ်တော့ စောင့်ကြည့်ကြပါလို.ပဲ ပြောချင်ပါသေးတယ်။
Next Article ဝမျးပကျြ ဝမျးလြှောခွငျးအတှကျ ဆေးတလကျ….